Arag sawiro qurxoon oo ka turjumaya bilicda iminka ee magaalada Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Arag sawiro qurxoon oo ka turjumaya bilicda iminka ee magaalada Muqdisho
Arag sawiro qurxoon oo ka turjumaya bilicda iminka ee magaalada Muqdisho
Dowladda Soomaaliya ayaa isku dayaysa in ay dib u dayactirto goobaha uu caanka ku yahay dalka, inkasta oo ay waqti dheer qaadan doonto in sidii ay horey u ahaayeen dib loogu soo celiyo.
Dowladda oo kaliya ma ahan dadka kaliya ee ku hawlan dib usoo celinta bilicdii iyo astaamihii magaalada, waxaa jira urur dhalinyaro oo iskood isu xilqaamay , shaqooyinka ay qabtaan waxaa ka mid ah dhireynta magaalada iyo bilic soo celinteeda.
Waddooyinka ugu waaweyn magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dareemi karaa isbedel muuqda waxaana xiliyada Maqribka ilaa Subixii socda Gaadiid noocyo kala duwan leh oo ay leeyihiin dad shacab ah, waxaana waddooyinka ku sugan ciidamo khaasa oo xiliyada habbeenkii suga amniga.
Maqribka ilaa Subixii waxaa sidoo kale si caadi ah u furan goobaha qaar ee ganacsiga, iyadoo ay xusid mudan tahay in goobaha caafimaadk ay shaqeeyan 24 saac, halka xiligii hore albaabada loo xiri jiray maqribka ka hor.
Sidoo kale, dadka shacabka iyo Hay’adaha amaanka ayaa sida uu nidaamku yahay gudanaaya shaqooyinkooda amni, waxaana ka dhexeeya wada shaqeyn joogta ah.
HOOS KA DAAWO SAWIRADA LAGA QAADAY BILICDA MUQDISHO